Ahoana no rivotra turbine manao herinaratra?
Ny rivotra manodidina mampody ny lelany; izany spins ny lavaka, izay mampifandray ny gropy. A mpamokatra angovo mamokatra herinaratra avy amin'ny angovo mekanika.
Inona no haben'ny rivotra turbine no ilaiko?
Izany dia miankina amin'ny angovo tinady. Azafady kajy ny Max fanjifàna herinaratra isan'andro. Eo ho eo, iray mahazatra an-trano Amerikana dia mitaky amin'ny 5kw turbine kely na ny 10kw turbine.
Inona no eo ho eo payback fe-potoana?
Ny halavan'ny fe-potoana ny payback miankina amin'ny turbine, ny kalitaon'ny rivotra noho ny fametrahana toerana, manjaka herinaratra tahan'ny, ary misy famatsiam-bola sy ny fanentanana. Miankina amin'ny lafin-javatra ireo sy ny hafa koa, ny fotoana mitaky ny tanteraka indray ny vidin'ny turbine rivotra kely dia afaka maka na aiza na aiza amin'ny 6 ka hatramin'ny 30 taona.
Ahoana no rafitra rivotra kely foana?
Mahazatra fisafoana dia nanao indray mandeha isaky ny taona vitsivitsy ny turbine ny 20 + -year mahatratra. A matihanina installer na voaofana teknisianina (matetika ny mpanamboatra na ny mpivarotra mpivarotra ny turbine) mitana ny turbine sy ny tilikambo amin'ny alalan'ny fisafoana ara-batana, na dia ny sasany dia azo araha-maso turbines lavitra avy amin'ny solosaina an-trano.
Ve aho mikasa mila fahazoan-dalana?
Small Wind Energy fametrahana drafitra dia mety hitaky fahazoan-dalana ary tokony hanontany foana ny eo an-toerana fahefana. Amin'ny ankapobeny, ny politikan'ny fandrindrana-pirenena manohana ny fampandrosoana ny sehatra kely Wind Energy.
Rivotra turbines tabataba?
Ny Small Wind Turbines no natao fa tena nangina, ohatra, rehefa mivantana rafitra fiara mba tsy lay boaty tabataba sy hampitombo fahombiazan'ny. Amin'ny ankapobeny, ny rivotra mihitsy manao tabataba kokoa noho ny rivotra turbine. Izany no tsy ampoizina indrindra fa ny horakoraka any Small Wind Turbines dia ho re ao amin'ny mihoatra ny 30 m. Ny tabataba any an-tsaha manodidina ny 40-50 dB (A).
7.What tsara fanahy fanohanana azonao mba hihary ho an'ny ao amin'ny-toerana fametrahana?
Alohan'ny fametrahana, dia Ho manome boky fampianarana ara-teknika rehetra. Mandritra izany fotoana izany dia afaka mandefa ny teknisianina mba hanara-maso ny fametrahana.
8.How no mifidy ny rafitra ara-dalàna?
Raha ny tetikasa dia Lavitra ny Grid-bahoaka Network, dia azonao atao ny handinika intsony rafitra Grid.
Manantena fotsiny raha mba hampihenana ny tahan'ny herinaratra, dia azonao atao ny handinika ny Grid rafitra.
Raha tsy izany, dia afaka manome ny bitika Grid / Telecom toerana sy ny rivotra rafi-masoandro mifangaro araka ny fepetra isan-karazany.
9.Maybe Afaka mividy fotsiny singa sasany toy ny lelan-tsabatra, inverter, sy ny tilikambo?
Eny, azonao atao. Izay mety ho mifandraika tetikasa, mandray anjara aminay.
Raha tsy ny famokarana, inona koa no azonao atao?
Vitantsika tompon'andraikitra amin'ny famolavolana, fanadihadiana, kajy, fametrahana sy ny asa fanompoana.